वाचा समाजवाद, व्यवहारमा सत्तावाद!
भूराजनीतिको भुमरीमा नेपाल
माधव नेपाल सिरक ओढेर रुन्छन् : ओली
सत्तारूढ दलले नै संविधान दिवसको सरकारी कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने
दुई मन्त्री थपिएसँगै बलियो भए मुख्यमन्त्री भट्ट
अझै किन ‘चरी जेलैमा!’
कक्षा ११ की ७८ वर्षीया विद्यार्थीको डाक्टर बन्ने धोको
सम्पदा पुनर्जागरण अभियानको शुरूआत, पत्ता लगायो अमेरिकाको म्यूजियममा दुई नेपाली मूर्ति
नेपाल बाङ्लादेश ब्यांककोे १०औं विस्तारित सेवा शुरू
टेक्कन आर २५० सार्वजनिक, मूल्य ४ लाख
उर्दू गजलको काठमाडौं सफर!
रिपोर्ट मोहन मैनाली
हामीसँगको पहिलो भेटमा कौशरले एउटा एउटा पाना झिकेर त्यसमा लेखिएका गजल सुनाएका थिए। “लेख्यो, सुनायो, पछि हराउँछ, फेरि नयाँ लेख्यो,” उनले भनेका थिए। त्यसपछि हस्तले नेपालगञ्जका स्टेशनरी पसलमा पाइने सबैभन्दा राम्रो र ठूलो नोट बुक किनेर कौशरलाई दिएका थिए, अबदेखि आफ्ना शायरी यसैमा लेख्नु भनेर। त्यही नोट बुक पल्टाएर अर्काे शायरी गाए कौशरले।
स्वादिला परदेशी निबन्धको भोक
'पूर्णता हासिल गर्न कोशिशै नगर्नुभन्दा कोशिश गरेर असफल हुनु' अनुवादका लागि पनि त उत्तमै हुँदो हो!
केन्जिङ कति दूर ?
हर्षदीपले एउटा हिमाचली लोकगीत पनि गाएकी रहिछन्- 'माय नि मेरिए सिम्ले दि राहे चम्बा कितनि क दूर' बोलको। यही क्रममा थाहा पाएँ, यो गीत मोहित चौहान लगायतका भारतका धेरै उम्दा गायकले पनि गाइसकेका रहेछन्। लोकगायक शरण दासले यसलाई मौलिक स्वरूपमा मौलिक बाजाका साथ गाएका रहेछन्। हिमाचलका पुस्तौं पुस्ताका लोकसर्जकले यो गीतको शब्दलाई मिहिन तरिकाले कुँदेका रहेछन्, मीठो भाकामा ढालेका रहेछन्।
‘एक गाउँ, एक भैरव दाइ’ नेपालका सबै गाउँमा मानिस छँदैछन्, मिहिनेत गर्ने पाखुरा छँदैछन्। जमिन, पानी, बोटविरुवा, हावा, घामजस्ता प्राकृतिक साधन धेरथोर मात्रामा छँदैछन्। मात्र उत्प्रेरकको मात्र खाँचो छ। सबै गाउँमा एक एक जना भैरव दाइ पुर्‍याउन सके आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेरहेछ।